Die schönsten Zitate zur Familie - Kostenlose Zitate Sammlung
Teny famakiana fianakaviana
Ny teny hoe fianakaviana dia avy amin'ny teny latina hoe "familia" ary tany am-boalohany dia niresaka ny ankohonan'ny lehilahy rehetra izany.
Teny nalaina, fitenenana ary fahendrena momba ny fianakaviana
Ankehitriny ny teny hoe fianakaviana amin'ny fiteny iraisana dia misy ny ray aman-dreny sy ny zanany.
Teny nalaina momba ny fianakaviana - © luckybusiness / Adobe Stock
Mizaha amin'ny alàlan'ny fanangonana ireo teny nalaina, teny ary fahendrena tsara indrindra momba ny fianakaviana:
Ny fianakaviana sambatra rehetra dia mitovy. Ny fianakaviana tsy faly rehetra dia tsy faly amin'ny fombany avy. Tolstoy
Satria mila ny havanao ianao amin'ny fotoana ilanao izany. Johann Wolfgang von Goethe
Ny anjelin'ny fianakaviana dia ilay vehivavy. Giuseppe Mazzini
Ny fiangaviana eo amin'ny fiainam-pianakaviana no vahaolana tsara indrindra hanimbana ny fitondran-tena. Jean-Jacques Rousseau
Ny fianakaviana dia tanindrazan'ny fo. Giuseppe Mazzini
Ny fianakaviana no zokiny indrindra amin'ny fiarahamonina rehetra ary izy irery ihany no voajanahary. Jean-Jacques Rousseau
Ny fitiavana dia manome ny namana, ny tombony no omena ny namana; tsara ho an'izay nateraky ny rahalahiny! Tsy afaka manome azy ny fahasambarana. Noforonina ho azy ny namana. Friedrich Schiller
Ireo natiora mifampiresaka haingana rehefa mifanena sy mifankahazo dia antsoina hoe mifandray. Johann Wolfgang von Goethe
Ny ray aman-dreny, mpampianatra ary mpanompo dia manana fahazarana adala amin'ny famoronana sy fikolokoloana ny fifaninanana eo amin'ny mpirahalahy mandritra ny fahazazany, izay matetika miharatsy ho lasa korontana rehefa lehibe izy ireo. Francis Bacon
Mampalahelo fa tsy dia vitsy ny ray aman-dreny izay ny orinasa dia tena fitahiana ho an'ny zanany. Marie von Ebner-Eschenbach
Ao amin'ny fianakaviana milamina dia tonga ho azy ny fahasambarana. Ohabolana sinoa
Ny havana dia mahalana kokoa noho ny olom-pantatra. August von Kotzebue
Rehefa tapaka daholo ny fatorana dia averina any amin'ny tokatrano ny iray. Johann Wolfgang von Goethe
Mampalahelo tokoa, Reny malala, ny fandrafiana ny samy mpirahalahy, ary sarotra toy inona moa ny fampihavanana. Friedrich Schiller
Faly izahay manampy fanampiny, teny sy fahendrena momba ny fianakaviana ao amin'ny angoninay!
Teny nalaina ho an'ny mpiray tam-po
Teny nalaina Batisa - Ohabolana Batisa
Teny nalaina avy tamin'i Rainer Maria Rilke
Teny fiainana - fahendrena eo amin'ny fiainana
Fitsipika momba ny babo | Quotes
Sekolin'ny teny nalaina